अन्तर्वार्ता - || यूथ फ्रन्टलाइन ||
काठमाडौं । धर्मराउँदै टिकेको कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन र एमालेबीच स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ । एमाले कमजोर नभएको निष्कर्षका आधारमा गठबन्धन बनेको हो । भन्...
अधिकांशले एमसीसी नपढीकन समर्थन र विरोध गरिरहेका छन् : लालबाबु पण्डित
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यक्रम के हो ? एमसीसी सम्झौता भनेको अमेरिकाले नेपाललाई विकासका लागि अनुदान दिन लागेको एउटा कार्यक्रम हो । तर यो कार्यक्रम हाम्रो देशमा बढी गिजोल...
काठमाडौं : ३८ वर्षसम्मको नृत्य अनुभव बोकेका भक्तपुर चाँगुनारायणमा जन्मिएका सुवास बुढाथोकी फेरि नृत्य निर्देशनमा फर्किएका छन् । केही समय अगाडि यस क्षेत्रबाट सन्यास नै लिए पनि कामको नृत्यको मोहले फेरि न...
पोखरा । गण्डकीमा ६० सांसद छन् । संविधानले २० प्रतिशत अर्थात् बढीमा १२ जनालाई मन्त्री बनाउने छुट दिएको छ । डोबाटे विश्वकर्मालाई सोमबार मन्त्रीमा नियुक्त गर्दै गण्डकीले आफ्नो कोटा पुर्‍याएको छ । यहा...
खासमा यो रामराज्य परिषद् भनेको के हो ?नेपालमाबहुदलीय संसदीय व्यवस्था छ । यो ब्यवस्थामा धेरै विकृतिहरु आए । यो व्यवस्थाजनताको हितमा छैन । यो ब्यवस्थाको ठाउँमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ठिक छ भनेर २०१...
कोभिड–१९ महामारीकै बीच आयोजित मिस नेपालको २५ औं संस्करणमा नम्रता श्रेष्ठ मिस नेपाल घोषित भइन् । सन् २०१६ मा उत्कृष्ट पाँचबाट बाहिरिएकी श्रेष्ठले यसपटक भने ताज जितेरै छाडिन् । हालैको एक दिउँसो कु...
काठमाडौं। प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका(देउखुरी) लाई टुङ्गो लगाएको छ । प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी घोषणासँगै लुम्बिनी प्रदेशवासीले साझा पहिचा...
अहिले विश्वसँगै हामी पनि कोरोनाको कहरमा छौँ । ४ महिना लकडाउनमा गयौँ, अहिले पनि निषेधाज्ञामा छौँ । कोरोनाले नेपाली महिलामा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? महामारी अप्रत्यशित रुपमा आएकोले यसमा पूर्वतयारी भएन ।...